Somaliland oo ku dhawaaqday inay joojisay siidhka iyo raashinka debedda looga keeno | Berberanews.com
Home WARARKA Somaliland oo ku dhawaaqday inay joojisay siidhka iyo raashinka debedda looga keeno
Somaliland oo ku dhawaaqday inay joojisay siidhka iyo raashinka debedda looga keeno
Tog Wajaale (Berberanews)- Wasiirka Wasaarada Horumarinta Beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo kormeer ku tagay Mashruuc Banka Tog Wajaale ayaa Shaaciyay War ka farxiyay Beeralayda Reer Somaliland.
Sidoo kale Wasiir Axmed Muumin Seed ayaa shaaciyay in Xukuumadu Joojisay gabi ahaanba siidhka kala duwan ee dalka dibadiisa laga keeno iyo Raashinka ay haayaduhu dalka Dibadiisa kasoo waridaan ee lagu soo Beego Xiliyada uu soo baxo dalaga dalku taasi oo dhaawac wayn ku haysa beeralayda dalka.
Previous articleHargeysa (Aftahannews)- Isbahaysiga uu Sucuudigu hoggaamiyo ee ka dagaallama dalka Yemen ayaa qirtay in ay duqayn dhanka cirka ah ku laayeen tobonaan qof oo rayid ah oo saarnaa gaadhi bas ah bishii lasoo dhaafay uuna ahaa khalad militari oo aan bareer ahayn. Baadhitaan uu sameeyey isbahaysigu ayaa lagu ogaaday in khalad uu dhacay – wuxuuna sheegay in dadkii masuulka ka ahaa weerarka lala xisaabtamo. Dalka Yeman oo dhibaato ay ka taagan tahay Dadka dhintay ayaa caruur u badnaa, weerarka ayaa waxaa ka dhashay dhaliilo caalami ah oo kadhan ah duqaymaha uu Sucuudigu hormudka ka yahay ee kadhanka ah fallaagada Xuutiyiinta ee dalka Yemen. Guddiga xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay xulafada uu horkacayo Sacuudiga ee weerarada cirka ka geysanaya Yemen. Warbixin uu soo saaray guddiga xuquuqda carruurta ayaa sheegay in weerarrada aan kala sooc laheyn ee ay xulafadu ku hayso goobaha dadka rayidka ah, ay ku dhinteen boqolaal carruur ah Waxa ay sidoo kale dhaleeceysay waxa ay ugu yeedhay tallaabooyin gaajo loogu dilayo shacabka. Warbixinta ayaa sheegaysa in ka badan saddex milyan oo carruur ah in ay wajahayaan nafaqa darro, iyadoo ay xaalad bani’aadanimo oo xun ay halkaa ka taagan tahay. Xulafada uu horkacayo Sacuudiga ayaa ku adkeysanaysa in duqeymaha cirka ay qaadayso aanay badhtilmaameedsaneyn dadka rayidka ah.
Next articleSomaliland: Furitaanka xog ururinta Hantida Maguurtada ah ee Dawladda